Kwokugara muRio: Mid-Range Hotels Pedyo neOlympics
Central & South America Bhuraziri Rio de Janeiro
6 Mid-Range Hotels Pedyo neOlympics
Mufananidzo Unofanirwa neChristian Tulip Continental
Chiitiko chikuru chemitambo gore, gore ra2016, maOlympic neParalymic Games , iri pasi pemazuva zana, uye vafambi vakabatikana kutenga matikiti kuOlympic uye vachigadzirira kufamba. Nevazhinji vakatarisira vachitarisirwa kugara muRio de Janeiro, zvingava zvakaoma kuwana nzvimbo dzekugara dziri pedyo neOlympic, asi aya matanhatu emitambo yakasiyana-siyana inopa nyaradzo uye kushanda pedyo neOlympic nzvimbo dziri muCopacabana uye Barra da Tijuca.
Nhamba yekutenda Hotel Vilamar Copacabana
Imwe mharaunda iyo ichava pakati pekuita kweMitambo yeOlympic ndiyo Copacabana . Neine nzvimbo yakakurumbira yegungwa nemigwagwa yakawanda, nzvimbo ino ine zvishoma zvezvinhu zvose zvevashanyi. Hotel Vilamar Copacabana iri hotera yechina-ine nzvimbo yakakodzera - makaro maviri kubva kuCopacabana Beach uye pasi pemaminiti kubva kuchiteshi chebhasi chiri pedyo.
Makamuri pano ari nyore asi akasununguka, ane air-conditioning, flat-screen TV, minifridges, uye vamwe vane whirlpool tubs. Wifi yakawedzerwa. Basa remakamuri rinowanikwa.
Ihotera ine resitorendi uye bhari, dziva reimba pamusoro pedenga, gumbo remufaro, uye mudzimba wemhepo. Vashanyi vanogona kunakidzwa nekunakidza buffet yezvokudya zvechingwa, mapeji, nyama, michero nemajisi muchitoroka kubva 6: 00-10: 00 mangwanani
Kana uri kutsvaga mukana weCopacabana asi unosarudza chimwe chinhu chinyanyisa, Hotel Golden Tulip Continental isarudzo yakanaka (inokurudzirwawo neLonely Planet). Iyi hotera yechina-iri iri pasi pemamita 1000 kubva kuCopacabana Beach munzvimbo yakanyarara yekugara inonzi Leme. Zvivako zvekutengesa, maharabhukiti, maresitorendi, nemabhagi zvose zviri mukati mechifamba.
Hotel Golden Tulip Continental ine mabasa akasiyana-siyana uye zvinobatsira: gadziriro yemangwanani, dziva riri panze rine gungwa rakareba uye magomo, mahwindo wifi, gym uye sauna, Poty Restaurant, basa rekugara, uye zvigadzirwa zvegungwa zvaunoshandisa.
Mufananidzo Wakaitwa Arena Copacabana
Imwe sarudzo muCopacabana ndiyo Arena yemazuva ano Arena. Ihotera iyi inosanganisira zvinodhura zvinodhura uye ine maonero akanaka egungwa uye nzvimbo yakakodzera, iri mhiri kwomugwagwa kubva kuCopacabana Beach. Nharaunda ye metro iri pedyo iri pasi pemaminitsi gumi kubva patsoka.
Makamuri ose anosanganisira mahwindo e-Wi-Fi, flat-screen TV, uye minifridges, makamuri akavandudzwa ane maonero egungwa, uye suites dzinosanganisira nzvimbo yakasiyana yehupenyu. Ihotera ine denga repamusoro pedenga reimba, inopindira bar, imba yefitness, uye sauna. Vashanyi vanogona kunakidzwa nekodha yemabiko yekutengesa kwekudya mune zvekudya zvekudya zvinowanikwa neefasi-kusvika-dari.
Nenzira yekutenderera Hotel Astoria Copacabana
Imwe nzira munharaunda yakashata yeCopacabana ndiyo Hotel Astoria Copacabana, iri mumugwagwa wakanyarara uri mamita 300 kubva kuCopacabana Beach uye nemaminitsi mana kubva panzvimbo yakasvivhisi yepamusha.
Inoshandisa denga reimba pamusoro pedenga, padziva rezasi, uye resitorendi iyo inoshumira zvikafu zvekudenga. Kune akasiyana-siyana emakamuri anowanikwa, kubva pahutano husina maturo kusvika kune zvemazuva ano. Makamuri ose akajeka uye anorongedzwa zvakanaka uye anosanganisira mahwanda wifi, A / C, cable, uye minibhari. Kunewo nzvimbo yehutano uye sauna. Bhuku rekudya rokumangwanani rinoshandiswa munzvimbo inofadza yekudya.
Mufananidzo Wakanaka Ibis
Iyi yehotera yezvino-nhatu-iri iri munzvimbo yaBarra da Tijuca. Icho chiri pasi pemakiromita maviri kubva kuParque Olimpico, uko mabhandi manomwe emakwikwi eOlympic achawanikwa.
Mahwendefa akajeka, ane bhuni rakaoma, A / C, mahwindo-terevhizheni TV, minifridges nemadhoroki. Vose makamuri vane wifi yega. Vatasviki vanogona kudya paresitorendi yekutengesa kana kunwa pabhasi, iyo inosvinwa maawa makumi maviri nemaviri. Bhuku rekudya rokusanganira rinowanikwa kune imwezve mari.
Leonardo Shinagawa, paFlickr
Promenade Paradiso All Suites iri pamuti wakatarisana nemuti weAvenida das Américas muBarra da Tijuca. Iyi yemahotera mana-yemazuva mana inofamba nemaminiti gumi kusvika kumahombekombe, Praia da Barra da Tijuca.
Makamuri anosanganisira mahwindo wifi, mabhaconi, firimu-terevhizheni TV, uye minibars. Suites dzinosanganisira kitchenette uye nzvimbo yekugara / yekudya. Iri pa-site bar, cafe, uye resitorendi zvinoshandisa zvinwiwa uye zvinodhura zvekudya zveBrazil, uye chikafu chinonaka chekudya chekudya chinoshandiswa muimba inopenya yekudyira. Ihotera yacho inopawo dziva guru, sauna, imba yehutano, uye kupaka kweimwezve mari.
Mhenderekedzo Yakanakisisa yeRio
Ko maOlympic 2016 anofanira Kubviswa Here?
Mhemberero Yokuzarura: Pasi Pemaonero
Rio's Best Views (Uye Kuti Ungavaona Sei)
Kwokugara MuMitambo yeOlympic
6 Mune Zvokudya Zvitsva muRio de Janeiro
Kutungamira Kunoshanyira Mahakaleshwar Temple ku Ujjain
Mukati meAtlanta: Ladybird Grove & Mess Hall naMichael Lennox
5 Zviitiko Zvokuita muBrazil
Halada Jewelry Stores muPrague
Kugeza muBhati sevaRoma Did
Paunenge Uchida Hovha Inopinda muLas Vegas Unoda Lobster ME
Mufambiro Wekufambira kuMaguta Makuru ePeru
Empurau: Imwe Inodhura Zvokudya
Nzira Nhatu dzekubhadharwa Nokufamba Kwekufamba Kwako
Chikonzero nei Tanjung Aru iri Gota Rakada Kudiwa Kota Kinabalu
Nzvimbo dzakakwirira dziri ku Cannes, iyo Chic Riviera City